Österströmsအိတ်အားလပ်ရက်ခြံဝင်း | Holmbygden.se
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသာယာလှပÖsterströmဝနျးကငျြ၌တည်ရှိ၏. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. ကောင်းသောအိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်လိုသောမည်သူမဆို ပတ်သက်. ပျူငှါနွေးထွေးသော bakehouse ငှားကျွန်တော်တို့ကိုမေလ. 40 နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စတုရမ်းမီတာ.
မည်သူမဆို, ချင်ခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း / ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေချမှတ်အသင်းအတွင်းမွေးစားနေကြ, အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်. သို့သော် Holmes စီရင်စုနယ်နယ်နိမိတ်အတွင်းနေထိုင်သောသူတို့အားအဖွဲ့ဝင်များအဘို့ကိုသာမဲပေးပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ. För övriga beviljas stödjande medlemskap. မတ်လအတွင်းက start မှာဆုံးဖြတ်ချက်အရ 2016 အဖွဲ့ဝင်ကြေး 50 / တနှစ်နှင့် Handelsbanken ရှင်းလင်းခြင်းအရေအတွက်ပေးဆောင်ရပါမည် 6344, အကောင့် 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.
17/3 -16: ÖsterströmsBygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Österströmအတွက် Fleamarket
Carina Hultman 0692-300 92 (အဆိုပါ bakehouse များ၏ငှားရမ်းခစီမံခန့်ခွဲ).
(Föreningen hette före 2016 “ÖsterströmsBygdegårdsförening” och var länge fastighetsägare av den s.k. “အဟောင်းကိုကျောင်း” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)